प्रो-लाइसेन्सप्राप्त प्रशिक्षक अल्मुताइरीसँग किन डराउँछ एन्फा ? — Himalisanchar.com
चुनावी माहोलमा बलियो बनाउन अल्मुताइरी मुख्य हतियार
काठमाडौं – नेपाली फुटबल टोलीले पहिलोपटक प्रो-लाइसेन्सप्राप्त प्रशिक्षक हुन् अब्दुल्लाह अल्मुताइरी । कतार फुटबल एसोशिएसनले एक वर्षका लागि अल्मुताइरीलाई नेपालका प्रशिक्षकको रूपमा पठाएको हो ।​ अल्मुताइरीले कतार फुटबल एसोसिएसनबाट मासिक तलब दिइन्छ । उनलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले यहाँ बस्न र खान सुविधाको मात्र व्यवस्था गरेको छ ।
एक वर्षका लागि आएका अल्मुताइरीको नेपाल बसाइ तीन वर्ष हुने भएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको पहलमा उनी नेपाल थप दुई वर्ष बस्ने भएका हुन् ।​ अल्मुताइरी नेपाल आएको धेरै समय भएको छैन । तर, विभिन्न कारणले उनको चर्चा भइरहेको छ । नेपालले विश्वकप छनोटअघि इराकविरुद्ध गरेको प्रदर्शनमा उनलाई राम्रो श्रेय गयो । त्यसपछि नेपाली टोलीले साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा स्थान बनाउँदा पनि उनी नेपाली समर्थकको नजरमा परे ।
त्यसपछि नेपाली टोलीको प्रदर्शन राम्रो भएको र युवा खेलाडीले मौका पाएकाले टिम राम्रो बनेको चर्चा चल्यो । खेलको नतिजा भने नेपाली टोलीको पहिलेको जस्तै थियो । यद्यपि, प्रदर्शनमा केही परिवर्तन आएको छ । उनी नेपाली टोलीका पहिलो प्रशिक्षक हुन्, जो समर्थकको नजिक छन् । उनले समर्थकसँग गर्ने कुराकानी, उनीहरुको फेसबुक पोस्टमा गर्ने कमेन्टले त्यो देखाउँछ । अल्मुताइरी समर्थकसँग भिडियो कल गर्न पनि भ्याउँछन् । उनले समर्थकको भावनालाई सम्झन्छन् अनि समर्थक उनको भावनाको कदर गर्छन् ।
अल्मुताइरीसँग किन डराउँछ एन्फा ? कतार फुटबल एसोशिएसन नेपाली फुटबलका लागि मुख्य सहयोगी माध्यम बनेको छ । कतारले नेपाललाई प्रो–लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक निःशुल्क पठाएको छ । कतार फुटबल एसोशिएसनले नै अल्मुताइरीलाई सेवा सुविधा दिन्छ । प्रो–लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक नेपालमा भित्र्याउँदा ८ देखि १२ हजार डलर मासिक एन्फाले खर्च गर्नु पर्छ ।
त्यसको भार अहिले कतार फुटबलले ब्यहोरेको छ । यता कतारकै कतार एरवेजले ए डिभिजन लिगलाई बर्सेनि करोडौं रकम दिन्छ । कतार फुटबलले नै नेपाली खेलाडीलाई ठूलो उपचार गर्नु परेमा नेपालबाट बोलाएर निःशुल्क उपचार गराइदिने गरेको छ । त्यसैले अहिले कतार फुटबल एन्फाको शिरोपर छ । यदि एन्फाले अल्मुताइरीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएमा कतार फुटबलले आफूलाई हेर्ने नजरिया बदलिन सक्छ भन्ने डर एन्फालाई छ । कतार फुटबलले दिने सुविधा बन्दमात्र गरेमा एन्फालाई आर्थिक भार पर्नेछ ।
उसो त एन्फा अहिले नै आर्थिक भारमा छ । यसै बीचमा अल्मुताइरीलाई एन्फाले हल्का दबाव दिएको सुइँको मात्र पाएमा कतार फुटबलले अल्मुताइरीलाई फिर्ता बोलाउने छ । कतार एन्फासँगको सम्बन्ध पनि चिसिने छ ।
चुनावी माहोलमा बलियो बनाउन अल्मुताइरी मुख्य हतियारः एन्फाको चुनाव आगामी असार ६ गतेबाट हुँदैछ । त्यसका लागि कर्माछिरिङ शेर्पा र पंकज नेम्बाङ प्रतिस्पर्धामा छन् । अध्यक्ष शेर्पाका लागि चुनावमा बलियो बन्न अल्मुताइरीको साथ आवश्यक छ ।​ अल्मुताइरीले बेला–बेला शेर्पालाई आफ्नो दाइ भन्दै मायाले सम्बोधन गर्छन् । त्यसैले अल्मुताइरीलाई झनै बलियो बनाएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षसँग अल्मुताइरीको सम्बन्ध राम्रो छैन । चुनावका समयमा अल्मुताइरीले शेर्पालाई सहयोग गर्ने प्रस्ट छ ।
त्यसैले शेर्पाले अल्मुताइरीलाई चुनावसम्म आफ्नो साथमा राख्न खोजेका छन् । उसो त एन्फा अध्यक्ष छान्नका लागि समर्थकहरुको भोट चाहिँदैन । तर, पनि अल्मुताइरीलाई साथमा लिँदा चुनावी माहोलमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष शेर्पाको बुझाइ छ ।
खेलाडीले न्याय माग्दा पनि एन्फा मौनः एएफसी एसियन कप छनोटका लागि प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीहरु क्याम्प छोडेर गए । मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीसँग खटपट हुँदा खेलाडीले रातारात मैदान छोडेर जानुपर्ने बाध्यता भयो । खेलाडीले मैदान छोडेर गएको विषयमा अल्मुताइरीले उनीहरुलाई माफी दिनु भन्दै पन्छिन खोजे । यता खेलाडीहरुले आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै छानबिन गर्न एन्फासमक्ष आग्रह गरे ।
खेलाडीको आग्रह सुनेका एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले चुनावसम्म प्रशिक्षक विवादको विषयमा आफूले केही गर्न नसक्ने बताए । खेलाडीहरु न्यायका लागि भन्दै एन्फा धाए । युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुँदै राखेप सदस्य–सचिवसम्म पुगे । लगातारको दबावपछि एन्फाले २५ गतेका लागि बोर्ड बैठक बोलाएको छ ।
उक्त बैठकमा खेलाडीहरुलाई न्याय दिने कुरा उठ्ला तर, प्रशिक्षक अल्मुताइरीलाई कारबाही गर्ने आँट भने एन्फाले नगर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।